Sida loo adeegsado Twitter-ka cusub | Androidsis
Sida loo isticmaalo Fleets cusub ee Twitter
Shabakada bulshada ee Twitter-ka ayaa go’aansatay inay soo saarto Fleets, sheekooyin soconaya ilaa 24 saacadood oo ay ku rakibaan sawirada, fiidiyowyada iyo xitaa fariimaha qoraalka ah. Waxaan sharaxaad ka bixin doonnaa sida loo adeegsado doonyaha cusub, maadaama ay hadda tahay dareenka cusub ee mid ka mid ah adeegyada loogu isticmaalka badan yahay isgaarsiinta.
Muddadu waxay noqon doontaa maalin dhan, markii waqtigan ay dhaafto waa la tirtiri doonaa, markaa dadka isticmaala ma arki doonaan isla waqtigaas isla maalintaas kadib daabacaadda. Sida laga soo xigtay Twitter, Fleets waxay u adeegaan inay wadaagaan fikradaha ama milicsiga ku-meel-gaadhka ah ha ka gudubto maskaxdeena.
1 Sida loo isticmaalo Fleets cusub ee Twitter
2 La Wadaag Ciidan ahaan Tweet ahaan
Kaliya ku rakib barnaamijka Twitter Android qalabkaaga gacanta si aad u bilawdo isticmaalkiisa, dooro sawir wanaagsan, fiidiyoow ama fariin qoraal ah oo munaasabadda ku habboon. Isticmaalka Fleet-ka ayaa ku siin doona inaad gaarto, maadaama ay ka mid noqon doonto waxyaabaha ugu muhiimsan ee astaantaada shabakadda microblogging.
Maraakiibta ayaa badal u ah Sheekooyinka Instagram, waa mid ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxa Twitter-ka waana la soo afjari doonaa howsha, sidaa darteedna waxaa jira malaayiin badan oo isticmaaleyaal ah oo tijaabinaya. Ikhtiyaarka Fleets waa la arki karaa, laakiin waxaan kuu sharxi doonaa sida ugu fudud ee loo isticmaalo:
Ku fur barnaamijka Twitter-ka taleefankaaga Android akoonkaaga gaarka ah ama midka aad sida joogtada ah u isticmaasho
Marka dalabku furmo, wuxuu ku tusi doonaa thumbnails xagga sare, astaantaada guud wuxuu ku tusi doonaa erayga «Add», guji si aad u hesho Fleets
Xullo sawir ku habboon, fiidiyoow ama qoraal, sida caadiga ah weydiiso rukhsad nuxurka iyo feylasha qalabka ku duuban, u oggolow rukhsaddan si ay u hesho sawirro, agabyo iyo kuwa kale, marka laga reebo inaad sawir qaadi karto wakhti kasta oo aad la wadaagi karto wata Diyaarado
Markaad doorato sawirkaas, fiidiyowga ama qoraalkaas, sii Fleet si ay u daabacdo oo uga muuqan doona midigta kore waxaadna ku daabici doontaa Fleet-kaaga koowaad barta Twitter-ka
La Wadaag Ciidan ahaan Tweet ahaan
Ikhtiyaarrada waxaad ka heli doontaa inaad daabacdo Fleet sida tweetSi tan loo sameeyo, guji falaarta hoose ee aad ku leedahay midigta kore. Markaad gujiso, waxaad furi doontaa menu halkanna waa inaad doorataa ikhtiyaarka «Share in a Fleet» si aad u fuliso hawsha oo dhammaystiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo isticmaalo Fleets cusub ee Twitter
Poco M3 waxaa lagu muujiyay turjumaadyo ka hor inta aan lagu dhawaaqin November 24
ZTE Blade 20 Pro 5G wuxuu si rasmi ah ugu shaqeynayaa kamarad afar geesood ah oo loo yaqaan 'Snapdragon 765G' iyo '64 MP'